Fanandroana malagasy : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Fanandroana malagasy : Fahasamihafan'ny versiona roa
Fanandroana malagasy (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 4 Mey 2020 à 09:56
580 octets ajoutés , il y a 4 mois
Endrik'io pejy io tamin'ny 24 Janoary 2020 à 15:48 (hanova)
Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday Modification sur mobile avancée
Endrik'io pejy io tamin'ny 4 Mey 2020 à 09:56 (hanova) (esory)
[[Sary:New Moon at sunset.jpg|vignette|382x382px]]
Ny '''fanandroana malagasy''' dia endriky ny [[fanandroana]] ataon'ny mpanandro malagasy izay andinihany sy ampiharany ny fifandraisan'ny fotoana ahaterahan'ny olona iray na ny fotoana ahatanterahan'ny zavatra iray ampifandraisinaandaniny, amin'ny toerana sy ny toetran'ireo zavatra eny amin'ny lanitra, indrindra ny [[Volana]], ankilany, araka ny [[Tetiandro malagasy|tetiandro nentin-drazana malagasy]] sy ny fifandraisan'izany amin'ny ho toetr'ilay olona teraka na ilay zavatra miseho na tiana hotanteraka. Izany fifandraisana izany no atao hoe vintana. Ambaran'ny mpanandro malagasy fa mamaritra ny toetra sy ny hoavin'ny olona ateraka na ny zavatra tanterahina tandrify azy ny vintana nefa azo ovana izany amin'ny alalan'ny [[fanalana vintana]] na fanalana faditra raha ratsy ka atahorana hitera-doza io vintan-dratsy io. Tsy ny vintana mifandray amin'ny [[Volana]] sy ny kintana ihany anefa no voakasiky ny fanandroana malagasy fa ny vanim-potoana rehetra hatramin'ny [[andro]] ao amin'ny [[herinandro]] sy ny fizaràn'ny andro, ka hatramin'ny [[fizaran-taona]] sy ny [[taona]] koa. Manampy izany ny [[Lafin-tany|lafintany]] (atsimo, avaratra, atsinanana sns) sy ny zavatra hafa toy ny tany, ny [[rivotra]], ny [[afo]] ary ny [[rano]] sns. Tsy ny volana sy ny andro ihany no manan-danja eo amin'ny fanandroana malagasy fa ny fizarazaran'ny andro koa, toy ny maraina sy ny tolakandro, ny andro sy ny alina, ny miposaka masoandro sy ny mitatao vovonana sy ny milentika masoandro sns. Noho izany dia tsy ny fotoana ihany no sahanin'ny fanandroana malagasy fa ny [[erana]] na ny habaka koa.
Fanao andavanandro teto Madagasikara ny fankanesana any amin'ny mpanandro teo amin'ireo [[andriana]] amintamin'ny taonjato faha-18 sy faha-19. Tao Imerina teo antenantenan'ny taonjato faha-19 dia nahay nanandro ny iray ampahatelon'ny olona<ref name=":1"><small>Jobily Rakotoson, "L'art divinatoire, parole d'un sage" in ''Madagascar fenêtres'', 2002, p.93.</small></ref>.
Araka ny finoan-drazana malagasy dia lova avy amin'ny ray aman-dreny na talenta avy amin'ny [[Zanahary (anaran-tsamirery)|Zanahary]] ny fanandroana. Ilain'ny MalagasyNataolo malagasy ny mampijerymanontany mpanandro alohan'ny hiterahana, hanamboarana trano na fasana, hanaovana hasoavana na fanambadiana, hisantatra na hitokana zavatra, handevina sns.
Raha tiana ho azo ny fanandroana malagasy dia tokony havahana ny hoe [[antokon-kintana]] sy ny hoe vintana ary ny hoe [[tetiandro]]. Mifandray tanteraka amin'ny tetiandro ny vintana. Ny fifandraisana misy eo amin'ny [[antokon-kintan'ny zodiaka]] sy ny vintana dia efa tsy hentintra intsony noho ny fanandroana sy ny tetiandro malagasy manara-bolana fa tsy manara-kintana na manara-masoandro tanteraka.
Tsy ny volana sy ny andro ihany no manan-danja eo amin'ny fanandroana malagasy fa ny fizarazaran'ny andro koa, toy ny maraina sy ny tolakandro, ny andro sy ny alina, ny miposaka masoandro sy ny mitatao vovonana sy ny milentika masoandro sns.
== Fanamarihana ankapobeny ==
Ireto avy ireo anaram-bintana amin'ny fanandroana malagasy izay sady anaran'ny volana malagasy avy amin'ny teny arabo koa: [[Alahamady]], [[Adaoro]], [[Adizaoza]], [[Asorotany]], [[Alahasaty]], [[Asombola]], [[Adimizana]], [[Alakarabo]], [[Alakaosy]], [[Adijady]], [[Adalo]] ary [[Alohotsy]]. Mbola iadian-kevitra ny fotoana mifanandrify amin'ny volana tsirairay noho ny fahasamihafam-piheverana misy eo amin'ireo milaza tena fa manam-pahaizana momba ny [[tetiandro malagasy]].
=== Fifandraisan'ny vitana ===
Atsidika hatrety amboalohany fa ny [[Fiteny malagasy|teny malagasy]] hoe ''vintana'' dia avy amin'ny [[Fiteny indôneziana|teny indoneziana]] hoe ''bintang'' izay midika hoe "kintana". Lasa tsy dia mifandray loatra amin'ny [[Kintana]] ny fanandroana malagasy taty aoriana fa amin'ny Volana, hadino ny fiavian'ilay teny. Ny hoe vintana dia tsy manondro kintana intsony fa fizaram-potoana ao anatin'ny iray volana na iray andro na fizaran'ny erana manodidina.
==== Renivintana "mibaby" sy "mitrotro" zanabintana ====
==== Fanombohan'ny tononandro ====
Tsy isaina ho andro voalohany ao amin'ny volana ny tonon'andro iray raha tsy tsinana alohan'ny mitataovovonan'io andro io ny Volana. Miteraka fahasamihafana arakaraka ny faritra anaovana fanandroana izany satria tsy amin'ny 12 ora antoandro amin'ny famantaranandro araka ny hasin'ora nifanarahanaifanarahana izany. Ny mitataovovonana any amin'ny faritra atsinanana indrindra eto Madagasikara dia tsy mitataovovonana any amin'ny faritra andrefana. Raha tononandro vava Alahasaty amin'ny volana Alahasaty, ohatra, no mifanojo amin'ny andro Alatsinainy any andrefana, dia mety efa vonto Alahamady ny any atsinanana, raha ohatra ka manodidina ny mitataovovonana ny nahatsinanan'ny Volana. Mety hiteraka fahadisoana koa ny tsy fahitana ny fotoana ahafatesana na ahatsinanan'ny Volana noho ny fisian'ny rahona na orana na tendrombohitra manakona ka misakana ny fijerena izany, na noho ny hakamoan'ny mpanandro "mamono volana an-trano".
==== Isan'ny andro ao anatyanatin'ny iray volana ====
Ny ao anatin'ny iray [[Tetiandro malagasy|volana malagasy]] dia mety misy 28 hatramin'ny 30 andro. Ny 29 sy ny 30 andro no matetika indrindra satria maharitra 29 andro sy 12 ora ary 44 minitra ny tsingerim-pihodinan'ny [[Volana]] amin'ny [[Tany]]. Raha misy 28 andro ny iray volana dia mifarana amin'ny vodin'ny vintana mitovy anarana amin'ny volana eo aloha ny volana diavina (ohatra, mifarana amin'ny vody Alohotsy, raha ny volana Alahamady no diavina). Raha tsy tsinana ny Volana alohan'ny mitataovovonan'ny faha-29 andro dia lasa misy 29 andro ny iray volana ka mifarana amin'ny vavan'ny vintana mitovy anarana aminy io volana diavina io (ohatra, mifarana amin'ny vava Alahamady, raha ny Alahamady no volana diavina). Fa raha mbola tsy tsinana ihany ny Volana amin'ny faha-30 andro dia misy 30 andro ny iray volana ka mifarana amin'ny vodiny na ny vonton'ny vintana mitovy anarana aminy io volana diavina io, ka vodiny raha zanabintana fa vontony raha renivintana.
=== Ny toetra ankapoben'ny tonon'andro ===
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/990537"